ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားရင်တောင် ဂျပန်မှာသာ မြင်တွေ့နိုင်မယ့် အရာ ၉ ခု - ONE DAILY MEDIA
ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားရင်တောင် ဂျပန်မှာသာ မြင်တွေ့နိုင်မယ့် အရာ ၉ ခု
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုမှ အစိတ်အပိုင်းများသည် ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀တွင် ပါဝင်နေပါတယ်။anime ကြိုက်သူအများအပြား နှင့် ဂျပန်တီဗီစီးရီးများကို ကြည့်ရှုကြသူများ ၊ wok နှင့် ဆူရှီစားကြပြီး ဂျပန်အဆိုတော်များ၏ သီချင်းများကို နားထောင်ကြသူများ များစွာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် ကာရာအိုကေသည်လဘ်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာပုံရသော အရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ထွန်းသစ်စနေမင်းတိုင်းပြည်တွင်သာ တွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာအချို့ ရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်မှလွဲ၍ မည်သည့်‌ နေရာတွင်မှမမြင်နိုင်မည့် ယဉ်ကျေးမှုများကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။
” အစိမ်းရောင်ကိုတွေ့ရင် လမ်းဖြတ်ကူးပါ” ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်ကပင် သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် ဂျပန်ရှိ လူကူးမျဉ်းကျားအချို့တွင် မီးစိမ်းကို သင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား “ဒတ်ချ်ကလေးငယ်များ၏စာအုပ်”ရေးသားသူ Dick Bruna မှ ဖန်တီးထားသည့် ယုန် Miffy ဇာတ်ကောင်ကို သင်တွေ့ရပါမယ်။ သို့သော် ဤဇာတ်ကောင်ကို ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် မည်သို့‌ ပေါင်းစပ်ထားပါသလဲ ? ။ ရိုးရှင်းပါတယ်။ Miffy သည် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်သော Hello Kitty နှင့် အလွန်တူပါတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်များနှင့် ဘားများမှာ ကုလားထိုင်များပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဂျပန်လူမျိုးများသည် နေရာတိုင်းတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ဦးစားပေးကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်၊ ဂျပန်ကဖေးများရှိ ထိုင်ခုံများဟာ အနိမ့်လက်တင်ကုလားထိုင်များကိုသုံးပါတယ်။ ဥရောပတိုက်သားများက ဤပရိဘောဂများကို Izakaya ဟုခေါ် ပြီး ယင်းမှာ နိမ့်သောထိုင်ခုံများကို သုံး‌သော အဆောက်အအုံအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အလွန်ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းပါရှိသည့် အထူးအနှိပ်ကိရိယာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်တွင် အရောင်စုံရေဘဝဲများကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးကြပါတယ်။
Pringles သည် ယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နိုင်ငံအများအပြားတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဂျပန်တွင် Pringles ဟာ ဤနိုင်ငံရှိလူများ မကြာခဏစားသုံးသည့် ခေါက်ဆွဲအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရန် သို့မဟုတ် နေ့လယ်စာ စားချိန်အတွင်း စားပွဲတွင် တစ်ယောက်တည်းထိုင်ရခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ပုံရပါတယ် သို့သော် ဂျပန်ကဖေးများတွင် တစ်ကိုယ်တည်း ဧည့်သည်များအတွက် ဝမ်းနည်းစရာမရှိအောင် ကြီးမားသော Moomin များကို ထားရှိပေးကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကော်ဖီအရောင်းစက်အများစုသည် အလွန်ဆင်တူကြပါတယ်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင် အချိုရည်နှင့် စက္ကူခွက်များကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ခလုတ်များစွာရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တော့ App တစ်ခုမှ ကော်ဖီကို မှာယူနိုင်ပြီး လိုချင်သောအချိန်တွင် စတိုးဆိုင်မှာ ရယူနိုင်စေမည့် ဝန်ဆောင်မှုသည် လူကြိုက်များလာပါတယ်။ စက္ကူ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ခွက်များအစား သင်စိတ်ကြိုက်‌ရွေးနိုင်သော ရောင်စုံပုလင်းများလည်း ရှိပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ပုံသဏ္ဍာန် ကွတ်ကီးတွေ စားဖူးပြီးပြီလား ? သင့်လက်ကို အိတ်ထဲသို့ထည့်ကာ သင်ရွေးချယ်မည့် ကွတ်ကီးဟာ မိကျောင်း သို့မဟုတ် လိပ် လားဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ် သို့မဟုတ် ခြင်္သေ့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်တွင်လည်း အတူတူပဲဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းတို့တွင် ပိုကီမွန်အရုပ်များကိုသုံးပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၊ နှစ်သစ်ကူးနှင့် ခရစ္စမတ်များတွင် လူများသည် အရသာရှိသော အစားအစာများစွာကို ချက်ပြုတ်ကြပြီး ကြီးမားသောပါတီပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်အစားအစာများ ဟာ အခမ်းအနားတစ်ခုမှာစားရတာနှင့်ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ လူတွေက ဒီအတွက် ကွဲပြားတဲ့ သဘောထားရှိကြပါတယ်။ ခရစ္စမတ်ညမှာ ရိုးရာခရစ္စမတ်ကြက်သားအစားကို KFC ကြက်သားကို စားရတာ နှစ်သက်ကြပါတယ်။
ဆူရှီကို စားပါက ထမင်းကို သံတူဖြင့် ကောက်လိုက်သည်နှင့် ငါးအပိုင်းပိုင်းများ မကြာခဏပြုတ်ကျသည်ကို သတိပြုမိမှာပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် အထူးချက်ပြုတ်နည်းတစ်ခုရှိသောကြောင့် ဂျပန်တွင် ယင်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဆန်ကို သကြား၊ ဆားနှင့် ဆန်ရှာလကာရည်များပါရှိသော ငံပြာရည်ဖြင့် ရောစပ်ထားပါတယ်။
ဂျပန်တွင်သာ တွေ့ရမည့် ဂျပန် နေ့စဥ်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြားအရာများကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်ပါသလဲ ?? တစ်ခုခုအကြောင်း သင်သိတာရှိပါသေးလား ??
ဒေါ်လာသန်းချီတန် ပန်းချီကား ၉ ခု
ကမ္ဘာ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံ
ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်ဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ နေထိုင်နည်းများ